ခက်မာ: လေးဆယ့်ငါးနာရီ ကြာခရီးစဉ် 1. 2.
`လေယာဉ်ပျံထဲမှာ ရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်လား။ မေကြီး´
`အင်္ဂလိပ်လိုပြောပေါ့သားရဲ့။လေယာဉ်မယ်တွေက ဗမာလိုမှ နားမလည်တာ´
`သား QELC အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းမှာတက်တုန်းက ရှူရှူးပေါက်ချင်ရင် Please may I go out လို့ပြောရတယ်။လေယာဉ်ပျံပေါ်မှာရှူရှူးပေါက်ချင်ရင်ရော အဲဒီလိုပဲပြောရမှာလား´
သားတို့ညီအကိုနှစ်ယောက်စကားကြောင့်ကျွန်မတို့ဝါးကနဲရယ်မိတော့အတူစောင့်နေ တဲ့ခရီးသည်တွေက၀ိုင်းကြည့်ကြတယ်။ရယ်ကြောမှမသတ်ရသေးခင်ကြော်ငြာသံတခု ကြားရတယ်။ လေယာဉ်အထွက်နောက် ကျမယ်တဲ့။
သားကြီးကအဲဒီလိုညည်းတွားတယ်။ China Airline က၀န်ထမ်းတွေ ယောက်ယက် ခတ်နေတာမြင်နေရတော့ တခုခုတော့ဖြစ်နေပြီလို့တွေးမိတယ်။အနောက်တိုင်းဝတ်စုံ အပြည့်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့တရုတ်အမျိုးသားတွေ စကားပြောစက်တွေတဖက်၊ဆဲလ် ဖုန်းတွေတစ်ဖက်နဲ့ waiting room ထဲဝင်လာလိုက်၊ကာင်တာကမြန်မာတရုတ်မ
လေးငါးခါ လောက်လုပ်ပြီးသွားချိန်မှာ နောက်တကြိမ်ထပ်ကြေငြာပြန်တယ်။လေယာဉ်
ကည၁၁နာရီခွဲမှထွက်နိုင်တော့မယ်တဲ့။လေယာဉ်ကွင်းမှာပဲစောင့်ချင်စောင့်။ရန်ကုန်မှာ အိမ်ရှိတဲ့သူတွေကအိမ်ပြန်စောင့်ချင်စောင့်ကြပါတဲ့။ ည၁၀နာရီအရောက် လေယာဉ် ကွင်းပြန်ရောက်ရင်ရပါပြီတဲ့။
ကျွန်မသားတွေကဟာကနဲဟင်ကနဲ ညည်းတွားကြတယ်။စောင့်နေတဲ့ခရီးသည်တွေလည်းပွစိပွစိဖြစ်ကုန်ကြပြီ။ကျွန်မလည်း စိတ်နည်းနည်းညစ်သွားပြီး ကောင်တာနား သွားစပ်စုမိတော့ ၁၁နာရီခွဲထွက်မယ့်
လေယာဉ်ရဲ့တံခါးမကြီးက အံဝင်အောင်ပိတ်လို့မရတော့လို့တဲ့။ပြင်လို့လည်းမရတော့ ခရီးသည်တွေလုံခြုံ ရေးအတွက်စိတ်မချရဘူးတဲ့။ရန်ကုန်လေယာဉ်ကွင်းမှာ China Airline ရဲ့အပိုလေယာဉ်တစ်စီးလည်းမရှိ တာကြောင့်လေယာဉ်တစ်စင်းအစားထိုး
ပေးဖို့ထိုင်ဝမ်ကိုလှမ်းအကြောင်းကြားထားတယ်တဲ့။ထိုင်ဝမ်ကနေရန်ကုန်ကိုပျံသန်းချိန် က ၆နာရီကြာမယ်တဲ့။
ကျွန်မတို့က ရန်ကုန်မှာပြန်နားဖို့အိမ်ရှိပေမယ့် ပြန်ဖို့တော်တော်စဉ်းစားနေရတယ်။ကျွန်မတို့အိမ်မှာ သားတို့ဟိုဖက်ဒီဖက်အဖိုးအဖွားတွေကျန်ခဲ့တယ်လေ။အဖိုးအဖွားတွေကမြေးတွေနဲ့ နှစ်
ရှည်လများခွဲရမှာမို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတာ။နောက်တခေါက်အိမ်ပြန်သွားပြီးထပ်ခွဲ ခဲ့ရမှာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူး။ပြီးတော့သူတို့ရှေ့တင်လေယာဉ်ကွင်းအပေါ်ထပ် ကိုတက် သွားတဲ့ကျွန်မတို့က သူတို့ရှေ့ ဝုန်းကနဲပြန်ရောက်သွားရင် ဘာများဖြစ်လို့ပါလိမ့်ဆိုပြီး လန့်သွားလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့တောင်ဥက္ကလာကအဒေါ့်အိမ်ဖုန်းဆက်။အကျိုးအကြောင်း ပြော
လို့ တောင်ဥက္ကလာဆီ ချီတက်ကြရပြန်တယ်။
တောင်ဥက္ကလာမှာခဏနားပြီး နှုတ်မဆက်ရသေးတဲ့အမျိုးတွေကို လိုက်နှုတ်ဆက်နိုင်ခဲ့တယ်။ညနေစောင်းတော့လေယာဉ်ကနေ့လည်၁၁နာရီခွဲထွက်မယ့် အစားည၁၁နာရီခွဲမှထွက်မှာမို့ရောက်ချိန်နောက်ကျမယ့်အကြောင်းကျွန်မတို့ကိုကြိုနေ မယ့်ပရိုဂရမ်ကလူကြီးတွေကိုအကြောင်းကြားဖို့အင်တာနက်ဆိုင်သွားရတယ်။ဖြစ်ချင်
တော့ အင်တာနက်ဆိုင်မှာ လူကကြပ်နေတော့ နာရီဝက်လောက်စောင့်လိုက်ရသေး တယ်။ မီးမလာလို့ မီးစက်ဖွင့်ထားရတာကြောင့် မီးစက်ကထွက်လာတဲ့ဆူညံသံရော၊ မီးခိုးတွေရောကအင်တာနက်ကဖေးဆိုင်ခပ်ကျဉ်းကျဉ်းထဲက လူတွေကြားမှာ ဝေ့၀ဲနေ တယ်။ မီးခိုးငွေ့တွေရှူထားလို့မူးဝေနေတဲ့ ခေါင်းနဲ့ချွေးတလုံးလုံးကြားမှာအီးမေးလ် တစောင်ကိုအောင်မြင်စွာပို့ပြီးသကာလည၉နာရီခွဲမှာကျွန်မတို့မိသားစုလေယာဉ်ကွင်း ဆီ နောက်တခေါက်ချီတက်ခဲ့ကြပြန်တယ်။
ဒီတခါတော့ ချောချောမောမောပါပဲ။ကြေငြာထားတဲ့အတိုင်း ည၁၁နာရီခွဲမှာ လေယာဉ်ထွက်တယ်။ မူလက၀ယ်ထားတဲ့လေယာဉ်လက်မှတ်တွေအကုန် လွဲချော်ကုန်တာမို့ China Airlineကပဲ အစအဆုံးပြန် စီစဉ်ပေးတယ်။လေယာဉ်က ၁၅မိနစ်လောက်ပျံပြီးတာနဲ့ ကျွန်မသားတွေ မှန်းချက်နဲ့နှမ်းတွက်လွဲတော့တာပဲ။ တစ်ဖက်၂ခုံပဲပါတဲ့လေယာဉ်လေးက လေထဲမှာလူးလှိမ့်နေတော့ သူတို့မူးကြတာပေါ့။ `နားတွေကွဲထွက်တော့မယ်ထင်တယ်မေကြီး´
လို့ သူတို့အော်ပြောကြတယ်။နောက်တစ်နာရီလောက်ကြာတော့ သူတို့အိပ်ပျော်ကုန်ကြရော။ ကျွန်မတို့ တတွေ ကို ရန်ကုန်လေယာဉ်ကွင်းမှာကတည်းက ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးရမှုအတွက်တောင်းပန်တဲ့အနေနဲ့ China Airline က တစ်ယောက်ကို ဒေါ်လာ၅၀တန်ဈေးဝယ်ခွင့်လက်မှတ်ကူပွန်တစ်စောင်စီပေးတယ်။ကျွန်မတို့က မိသားစု၎ယောက်ဆိုတော့ စုစုပေါင်းဒေါ်လာ၂၀၀ဖိုးဈေးဝယ်ခွင့်ရတယ်။ဒါပေမယ့် ဈေးဝယ်ခွင့်ရမယ့်နေ့ကို မတ်လ၁၀ရက်နေ့တရက်ထဲ သတ်မှတ်ပေးထားတာကြောင့် လေယာဉ်ပေါ်မှာရောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲ sky shopping လုပ်ရတော့မှာပေါ့။ ဈေးမ၀ယ်ရင်ဒေါ်လာ၂၀၀ဆုံးမှာဆိုတော့ ၀ယ်ရတော့မှာပဲ။
လေယာဉ်မယ်လေးတွေပြလာတဲ့ ကတ်တလောက်ထဲက ပစ္စည်းတွေကိုရွေးရတယ်။ ဟိုဟာယူရ
ကောင်းနိုး။သည်ဟာယူရကောင်းနိုးနဲ့ လေယာဉ်မယ်လေးကိုလေးငါးခါလောက် ပစ္စည်းတွေပြောင်းပြခိုင်းပြီး တော့မှပဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ကျတော့တယ်။နီလာရောင်ပြေးနေတဲ့ ဒေါ်လာ ၁၆၀ တန်နာရီတစ်လုံးနဲ့ သားတွေ အတွက်ဒေါ်လာ၆၀တန်ဂိမ်းစက်တစ်လုံးဝယ်လိုက်တယ်။ဒေါ်လာ၂၀တောင် စိုက်လိုက်ရသေး။ ဂိမ်းစက်က မြန်မာငွေနဲ့ဆို၇သောင်းနီးပါးတန်တာမို့ ၀ယ်ရတာနှမြောတောတောပေမယ့် မှန်သွားတယ်လို့ဆိုရမယ်။ သားနှစ်ယောက်အိပ်ယာကနိုးလာတော့ ဂိမ်းစက်ကိုမြင်ပြီး သိပ်ဂျီမကျတော့ဘူး။ ခေါင်းမူးတယ်။ နားအူတယ် ဂျီကျသမျှ ဘာလုပ်ပေးရမှန်းမသိဖြစ်ပြီး စိတ်ညစ်ခဲ့ရတာ ဂိမ်းစက်နဲ့တွေ့တော့မှ သက်သာတော့တယ်လေ။
တိုင်ပေလေယာဉ်ကွင်းကို ၁၀ရက်နေ့ မနက် ၆ နာရီလောက်မှာရောက်တယ်။လေယာဉ်ပြောင်းဖို့ အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ လေယာဉ်ပေါ်ကဆင်းတော့ ဂိတ်ဝမှာ China Airline ၀န်ထမ်းတွေက စောင့်ကြိုနေကြ တယ်။ ကျွန်မတို့ပြောင်းရမယ့်လေယာဉ်က ညနေ၄နာရီမှထွက်မှာမို့ လေယာဉ်ပြောင်းရမယ့်ခရီးသည်တွေ အားလုံးကို ဟိုတယ်အခန်းတွေစီစဉ်ပေးထားတယ်တဲ့။
Airline ၀န်ထမ်းတွေမေးသမျှဖြေပြီး သူတို့ခေါ်ရာလိုက်ခဲ့တော့ လေယာဉ်ကွင်းအစမှာ ကားကြီးတွေ ကကြိုလို့။ လေယာဉ်ကွင်းဝန်ထမ်းက ဟိုတယ်ဆီခေါ်သွားမယ့်ကားဒရိုင်ဘာတွေဆီကျွန်မတို့ကိုလက်လွှဲအပ် ပေးခဲ့တယ်။ လေယာဉ်ကွင်းကနေ တစ်နာရီနီးပါးမောင်းရတဲ့ Taoyuan ဟိုတယ်ကိုသွားနေစဉ် တလျှောက် ထိုင်ပေမြို့ကိုငေးမောခွင့်ရတယ်။ ခမ်းနားလှတဲ့ဟိုတယ်ကြီးကိုရောက်တော့ သားတွေကအံ့သြပျော်ရွှင်လို့။ ကျွန်မတို့တည်းရမယ့်ဟိုတယ်က ၁၀ထပ်မှာမို့ တိုင်ပေမြို့ကို အပေါ်စီးကမြင်နေရတယ်။ ပြာလွင်တဲ့ပင်လယ် ရေပြင်နဲ့ မြို့တော်ရဲ့ ကုန်းမြေကိုတိကနဲအနားသတ်ထားတဲ့မြင်ကွင်းက အလွန်လှပဆန်းပြားနေတယ်။ တစ်ဖက်ကတစ်မျှော်တစ်ခေါ်ပင်လယ်ပြာကြီး။တစ်ဖက်ကကျတော့ မြင့်မားဆန်းပြားတဲ့ တိုက်တာအဆောက် အဦးတွေနဲ့ တိုင်ပေမြို့တော်။ လေယာဉ်ပေါ်မှာ၆နာရီလုံးလုံး ကျဉ်းကြပ်ညောင်းညာခဲ့သမျှ ထိုင်ပေနံနက်ခင်း ရှုခင်းကဖြေဖျောက်ပေးလိုက်သလိုပဲ။ ဟိုတယ်ကကျွေး တဲ့ နံနက်စာဘူဖေးကို အ၀စားပြီးတာနဲ့ အရေးအကြီး ဆုံးအလုပ်ကို ပြေးလုပ်ရတယ်။ထိုင်ပေရောက်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ စောစောကမှလေယာဉ်ကွင်းကရလာ တဲ့ ခရီးစဉ်အသစ်အချိန်ဇယားကို ကျွန်မတို့ကိုကြိုနေမယ့်သူတွေဆီ အကြောင်းကြားရပြန်တယ်။ ပြီးတော့မှ ဟိုတယ်နားအနီးတ၀ိုက် လျှောက်ကြည့်ကြတယ်။
ရာသီဥတုက နံနက်စောစောမို့ထင်ရဲ့ ။နေလို့ကောင်းရုံသာအေးနေတယ်။ စောသေးတာမို့ဆိုင်တွေ အစုံမဖွင့်သေးဘူး။ ဆိုင်တွေအားလုံးလိုလိုက တရုတ်စာတွေနဲ့ချည်းရေးထားတာမို့ ဘာဆိုင်တွေမှန်းမသိဘူး။ ထိုင်ပေမြို့တော်ဟာခမ်းနားထည်ဝါသလောက် သန့်ရှင်းလှပနေတယ်။ မနက်၉နာရီလောက်မှာ ဟိုတယ်ပေါ် ပြန်တက်ပြီး အိပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။
လေယာဉ်ပေါ်မှာ မူးဝေနောက်ကျိနားတွေအူခဲ့သမျှ လှပတဲ့မြို့တော်ကခမ်းနားတဲ့ဟိုတယ်ကြီးရဲ့အိစက်ညက်ညောတဲ့မွေ့ယာပေါ်မှာ လဲလျောင်းရင်း အတိုးချအနားယူကြတော့တယ်။ဒီလိုဆိုတော့လည်း ဘ၀ကနေပျော်စရာကြီးပါလားလို့ တွေးနေတုန်းမှာပဲ အိပ်ပျော်သွားလိုက်တာ နေ့လည်၁နာရီထိုးကာနီးမှပဲ မိသားစုအားလုံး တက်ညီလက်ညီနိုးတော့တယ်။ ခဏနေရင် လေယာဉ်ကွင်းကိုပို့ပေးမယ့်ကား ရောက်လာ တော့မှာမို့ တစ်ယောက်တစ်လှည့်စီရေမိုးချိုးခေါင်းလျှော်ပြီးချိန်နဲ့ ကွက်တိမှာပဲ ကားရောက်လာခဲ့တယ်။
ဒုတိယအကြိမ်စီးရတဲ့လေယာဉ်ကြီးကတော့ အကြီးကြီးပါပဲ။ လေယာဉ်ကကြီးလို့ ငြိမ်တာရော။ တစ်ယောက် ချင်းစီရဲ့ရှေ့မှာ TV အသေးလေးတွေကိုယ်စီနဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ချင်ကြည့်၊သီချင်းနားထောင်ချင်နားထောင်၊ ဂိမ်း ကစားချင်ကစားလို့ရတာရောဆိုတော့ သားတွေကသဘောကျလို့။ ကျွန်မတို့လူကြီးနှစ်ယောက်ကတော့ အချိန်တော်တော်များ အိပ်ပြီးလိုက်လာကြတာပါပဲ။ တိုင်ပေကနေ ၁၃နာရီကြာစီးရတဲ့ လေယာဉ်ခရီးဟာ နေ့ လည် ၁၂နာရီမှာ လော့စ်အိန်းဂျလိစ်မှာ အဆုံးသတ်လေရဲ့ ။
မြန်မာပြည်မှာထဲက လွဲခဲ့တဲ့လေယာဉ်ကြောင့် ကျွန်မတို့ရဲ့ မူလခရီးစဉ်တွေ အကုန်လွဲချော်ကုန်ပြီး Los Angeles မှာလည်း ခရီးလမ်းဆုံး Pittsburgh ကိုရောက်အောင် လေယာဉ်ပြောင်းစီးဖို့ ၁၀နာရီတိတိ
စောင့်ရပြန်တယ်။ အတော်ပူပြင်းနေပြီဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်ရဲ့ မတ်လနေရောင်အောက်ကဖြတ်သန်းခဲ့ကြတဲ့ ကျွန်မ တို့တတွေဟာ ထိုင်ဝမ်မှာတော့နေလို့ကောင်းရုံရာသီဥတုနဲ့ဇိမ်ကျခဲ့တယ်။ Los Angeles ရောက်တော့ သိသိ သာသာအေးနေပြီ။ လေယာဉ်ကွင်းကြီးကကျယ်လှပေမယ့် နားနားနေနေ လဲလဲလျောင်းလျောင်းနေလို့မရ ဘူး။ ထိုင်ပေမှာတုန်းကလို ကြိုမယ့်သူလည်းမရှိ။ တည်းစရာနေရာလည်းမရှိနဲ့။ လေယာဉ်ပျံပေါ်မှာနေခဲ့ရ တာကြောင့် လူကလည်းညောင်းလှပြီ။ဒါနဲ့ ဟိုတယ်များစီစဉ်ပေးထားသလားဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်ငွေ့ငွေ့နဲ့ China Airline ကောင်တာဆီ သွားမေးခဲ့သေးတယ်။
`ရန်ကုန်ကထွက်တဲ့ China Airline ရဲ့ လေယာဉ်မှာ ပြသနာဖြစ်တာနဲ့ ကျွန်မတို့မူလခရီးစဉ်တွေ အကုန်လွဲ ချော်ခဲ့ရတယ်။ထိုင်ပေမှာ၁၁နာရီစောင့်ရတဲ့အတွက် China Airline က ဟိုတယ်စီစဉ်ပေးတယ်။အခု Los Angeles မှာလည်း ၁၀နာရီထပ်စောင့်ရဦးမယ်။ကျွန်မတို့ကို ဟိုတယ်မစီစဉ်ပေးဘူးလား။´
ကျွန်မရဲ့ ခပ်ရှည်ရှည်မေးခွန်းကို အသက်ခပ်ကြီးကြီး China Airline ၀န်ထမ်းကခပ်တိုတိုပဲ`နိုး´လို့ဖြေတယ်။
`China Airline ကြောင့် ကျွန်မတို့အချိန်တွေနှောင့်နှေးကုန်ရတယ်လေ´
ကျွန်မက အဲဒီလိုအထွန့်တက်တော့ သူကသူ့အထက်အရာရှိကိုမေးပေးမယ်ဆိုတာနဲ့ သူ့နောက်ကကျွန်မ လိုက်သွားလိုက်တယ်။သူတို့ချင်းကွိကွိကွကွတွေ အပြန်အလှန်ပြောပြီး ကျွန်မကိုပြန်ပြောတယ်။`နိုး´တဲ့။
ကျွန်မစိတ်နည်းနည်းညစ်သွားတယ်။ ၁၀နာရီကြာအောင် ဘယ်လိုများစောင့်ရပါ့မလဲ။ သားတွေကတော့
ဟိုတယ်ကိစ္စမျှော်လင့်ချက်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ နောက်ထပ်အရေးတကြီးလုပ်ရမှာက ကျွန်မတို့ကို လာကြိုနေမယ့်သူဆီ အီးမေးလ်ပို့ဖို့ပဲ။ သားငယ်နဲ့သူ့ ဖေဖေက အထုတ်အပိုးတွေကိုစောင့်။ ကျွန်မနဲ့သားကြီး ကအင်တာနက်သုံးလို့ရမယ့်နေရာရှာကြပြန်တယ်။ Internet လို့ရေးထားပြီး laptop လေးတွေ လေးငါးလုံးချ ထားတာတော့တွေ့ပါရဲ့ ။ စောင့်ကြည့်နေသူလဲမရှိ။ဘယ်လိုသုံးရမလဲမသိမို့ ခဏကြာအောင်စောင့်ကြည့်ရ
သေးတယ်။ အမျိုးသမီးတဦးဝင်သုံးတာမြင်တာနဲ့ကျွန်မလည်းခပ်တည်တည်နဲ့ဝင်သုံးကြည့်တယ်။ ကွန်ပျြူတာ ကပိုက်ဆံထည့်ပါလို့တောင်းတာနဲ့ ၅ဒေါ်လာတန်တရွက်ထည့်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် အင်တာနက်ကပွင့်မ လာ သလို ပိုက်ဆံကလည်းပြန်ထွက်မလာပါဘူး။ဒါနဲ့ နောက်ခုံတလုံးကိုပြောင်းပြီး ဟိုနှိပ်ဒီနှိပ်လျှောက်နှိပ် တယ်။ ပိုက်ဆံထပ်တောင်းတာနဲ့ ၅ဒေါ်လာထပ်ထည့်လိုက်တယ်။ ဒီတခါတော့ ဘယ်လိုအပေါက်အလမ်း တည့်သွားတယ်မသိ။ Gmail ပေါ်လာတော့ ပျော်လိုက်တာ။ ကျွန်မတို့ LA ရောက်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်း၊
လေယာဉ်ကည ၁၀နာရီ၃၅ မှာထွက်ပြီး မနက်ဖြန်မနက်စောစော ၆ နာရီမှာ Pittsburgh ကိုရောက်မယ့် အကြောင်း emaily ပို့ပြီးချိန်မှာတော့ စိတ်ကတော်တော်ပေါ့ပါးသွားပြီ။ ပိုက်ဆံ၅ဒေါ်လာကတော့ ပြန်ထွက် မလာပြန်ဘူး။ကျွန်မဘ၀မှာ စာတစ်စောင်ကို ၁၀ဒေါ်လာပေးပြီးပို့ခဲ့ရတဲ့ ဈေးအကြီးဆုံးအင်တာနက် အသုံးပြု မှုပါပဲ။
၁၀နာရီတောင်အချိန်ဖြုန်းရမှာဆိုတော့ ဟိုနားဒီနားလျှောက်ကြည့်ဖို့ လေယာဉ်ကွင်းအပြင်ကိုထွက်ခဲ့ ကြတယ်။ အားပါး-အေးလိုက်တာ။ လေကလည်း တဝူးဝူးတိုက်နေတယ်။ လေဟာပြင်မှာ ကြာကြာမနေနိုင် တာနဲ့ လေယာဉ်ကွင်းထဲပြန်ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ Pittsburgh ကိုထွက်မယ့် လေယာဉ်ဂိတ်နံပါတ်ကိုရှာပြီး အဲ့ဒီဂိတ် မှာပဲစောင့်ကြဖို့ ထွက်ခဲ့ကြတယ်။ ဂိတ်ရောက်တော့ လူကပင်ပန်းနေပြီ။ ဗိုက်ကလည်းဆာနေပြီ။ မက်ဒေါ် နယ်က ကြက်ကြော်ဝယ်စားပြီးချိန်မှာတော့ မျက်စိတွေမှေးလာတယ်။သားအဖတတွေ လေယာဉ်ကွင်းထဲ ဟိုဟိုဒီဒီလျှောက်ကြည့်ကြချိန်မှာ ကျွန်မကတော့ ပြောင်လက်သန့်ရှင်းနေတဲ့လေယာဉ်ကွင်းကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ခရီးဆောင်အိတ်ကို ခေါင်းအုံးလို့ တရေးအိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်။
ည၁၀နာရီ၃၅မိနစ်မှာ Pittsburgh ကိုထွက်မယ့်လေယာဉ်ပေါ် တက်ကြပြန်တယ်။ US Airline ရဲ့လေယာဉ်ကခပ်သေးသေးပါပဲ။ လေယာဉ်ကသေးတော့သားတွေမူးမှာ၊ နားပူမှာစိတ်ပူမိသေးတယ်။ဒါပေမယ့် သူတို့က တနေ့လုံးမအိပ်ဘဲ Los Angeles လေယာဉ်ကွင်းထဲလျှောက်ကြည့်၊ ပြေးဆော့၊ စားချင်ရာဝယ်စား ထားကြတာမို့ ညအိပ်ချိန်ရောက်နေတာရော၊ ပင်ပန်းတာရော၊ ဗိုက်ဝတာရောပေါင်းပြီး လေယာဉ်ပျံပြီး မကြာခင်မှာပဲ အိပ်ပျော်ကုန်ကြပါလေရော။ လေယာဉ်သေးသေးပေါ်မှာတောင်ခရီးသည်က တ၀က်လောက် ပဲပါတာမို့ ကျွန်မတို့မိသားစုအပါအ၀င် တခြားခရီးသည်တချို့ ပါလေယာဉ်ခုံတန်းတွေပေါ်ကန့်လန့်ဖြတ်ပြီး သက်တောင့်သက်သာပဲ အိပ်လိုက်လာကြတာ Pittsburgh လေယာဉ်ကွင်းကိုလေယာဉ်ဆင်းမှပဲ နိုးကြ
တော့တယ်။ ကမ္ဘာ့အရှေ့ ခြမ်းက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စံတော်ချိန် မတ်လ ၉ ရက်နေ့ည ၁၁နာရီခွဲမှာ စတင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ ကမ္ဘာတခြမ်းဖြတ်သန်းရတဲ့ခရီးစဉ်ဟာ ကမ္ဘာ့အနောက်ခြမ်းက အမေရိကတိုက်ရဲ့ အရှေ့ ဘက်ခြမ်း Pittsburgh မြို့ စံတော်ချိန်မနက်၆နာရီမှာ အဆုံးသတ်ခဲ့ပါပြီ။
July, 2009၊ Pittsburgh
( Printed in Mandalay Gazette Newspaper in November 2009 and Perfect Magazine in 2009